🥇 ▷ Xiaomi Mi 9T Pro ayaa dhakhso loo heli doonaa Amazon: halkan waa taariikhda ✅
Xiaomi Mi 9T taasi waxay ku sii jirtaa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo jiidasho leh ee ay soo saartay shirkadda ‘Xiaomi’, labadaba qiimaha iyo camera-ka, guud ahaan waxay soo bandhigaysaa beddel aad u wanaagsan oo “caadi ah” kaasoo, si daacadnimo leh, ugu suurtagashay inay ku guuleysato qaybta weyn ee adeegsade. Sidaad ogtahay, isla waqtiyada Redmi K20 ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku xigay Redmi K20 Pro (nasiib daro waligeed kama imaan nooc kala duwanaansho oo caalami ah), laakiin maanta waxaa jira war wanaagsan. Haddii aad sugeysid nooca Pro ee Mi 9T ee hadda jira, oo ku saleysan macluumaadka sii deynaya, waxaan kugu wargalin karnaa inay dhowaan imaan karto.
Sidoo kale akhri: Xiaomi Mi 9T Pro hadda waxaa laga heli karaa GearVita! Waa tan kuubannada
MY 9T PRO WUXUU KA OGOLAANAYAA AMAZONIA KOOXDA 26AAD
Xiaomi Mi 9T Pro ayaa diyaar u noqon doonta iibsashada laga bilaabo Ogosto 26, haa! Maalintii waa dhow. Telefoonka casriga ah ee muddo dheer la sugayey waxaa laga heli doonaa qiimo dhan 449 € oo ah kaarboon buluug iyo madow ah. Iyada oo tan loo marayo isku xirka Ilaa taariikhda la muujiyay, waad ku sii wadi kartaa iibsashada aaladda.
Sidoo kale akhri: Amazon: Xiaomi Mi 9T oo ah € 279 oo leh meherkan cusub!
Kani waa nooc la wanaajiyey oo hadda Mi 9T ah, laakiin wuxuu leeyahay shaashad ah 6, 39 ″ Full HD + AMOLED la processor Snapdragon 855 iyo qolka sawirka oo leh 48MP dareemayaasha ugu weyn, waxaa ku xiga xagal ballaadhan (13MP) iyo 8MP zoom optical.
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=BHTCXtn5rbQ (/ embed)
Sidoo kale akhri: Xiaomi Mi 9T Pro waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 20
Waxay sidoo kale lahaan doontaa meel soo ifbaxa oo iskood u shaqeysa iyo baytariyada 4,000 mAh.
Suuqa waxaan ku imaan doonaa noocyo kala duwan oo ah 6/128 GB Waxaan ku xasuusinaynaa inay diyaar u tahay iibsashada Ogosto 26.